FBC - Dubartiin tokko wal’aansa haaraan kaansarii harmaa, qaama keessa faca’e, irraa bayyaannatte
Dubartiin tokko wal’aansa haaraan kaansarii harmaa, qaama keessa faca’e, irraa bayyaannatte
Finfinnee, Waxabajjii 1, 2010 (FBC) Dubartiin kaansarii harmaa qaama keessa faca’e qabdu seelii humnaa ishee fayyadamuun wal’aansa kennameefiin deebitee bayyaannatteetti. Wal’aansi akaakuu akkanaa kaansarii harmaaf yeroo hojjatu kun jalqaba. Kunis wal’aansichi namoota kaansarii qaban hedduu , erga qaama kaan keessa faca’eellee, gargaaruu danda’a.
Dubartiin Juudii Perkiins jedhamtu Filooriidaa kun wal’aansa kaansarii kaan torba yaalteetti; garuu, kaansarii harmaa qaama ishee kaan keesa faca’e qabdi. “ Tiruun ishee guutummaa muraa hanga kubbaa teenisii kan qabu akka ture Inistitiyuutii Fayyaa Biyyaalessaa Ameerikaa irraa Isteevan Rosenberg himaniiru. “ Ji’oota lamaa fi sadii keessatti ishee ajjeesuu danda’a ture” jedhaniiru.
Haata’u malee, Rosenbergii fi michoonni hojii isaanii mala haaraa immune siistamii (immune System) dabaluun kaansarii ishee wal’aanuuf carraaqii taasisanii torbanoota ja’a booda kaansariin Perkiins walakkaatti hir’ateera. Waggaa tokko boodas badaniiru. Wal’aansa kana waggaa lamaa fi walakkaaf erga argattee boodas fayya-buleettii taateetti.
Perkiins akka jettutti wal’aansa yaalii kana osoo hin-jalqabin dura ‘akka duutu yaadaa turte’. Wal’aansa kana erga argattee booda garuu jireenya idileetti deebi’uushee himteetti; deemsa miillaa dheeraafaa dabalatee.
Wal’aansi kun seelonni kaansarii guddataa fi baay’ataa wayita deeman qaamni ofirraa akka ittisu gargaaruu ture; ittisi qaamaa tokkoon tokkoo dhibamaa ammoo garaagara.
Hanga ammaa wal’aansa humna dhibee ittisuu dabaluu kanaan kaansariiwwan akka gogaa, fi sombaa, tamboo xuuxuu waliin wal-qabatu, irratti milkaa’inni murtaa’e argameera. Haata’u malee, wal’aansi akkanaa kaansariiwwan jijjiirama xiqqoo agarsiisan kan akka kaansarii harmaa irratti hin-yaalamne ture.
Oduuwwan Biroo « Ministeerri Eegumsa Fayyaa waliigaltee tajaajila ispeeshiyaalayizeeshinii babal’isuu Mootummaa Ispeen waliin walii mallatteesse	Maangoon rakkoo bullaa’insa soorataa ni fura jedhame-Qorannoo »